ဖွဲ့စည်းပုံထဲက ကာလုံ အခန်းကဏ္ဍ - DVB TV News
Posted by Aliff on September 4, 2017 in DVB Debate, အထူးအစီအစဉ်များ, အပတ်စဉ်ကဏ္ဍ
DVB Debate – “ဖွဲ့စည်းပုံထဲက ကာလုံ အခန်းကဏ္ဍ”
“ကာလုံရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ တာဝန်က ၂ ခု။ ကာလုံအဆိုပြုချက်ဖြင့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ကို ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရမယ်. နောက်တခုက အရေးပေါ်ကာလ တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ ကိစ္စတွေ. အဲဒီမှာ အဓိကအားဖြင့် ၂ ပိုင်း။ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသအလိုက် သမ္မတက ကာလုံနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာတာ။ တပြည်လုံးက ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်နေလို့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို အာဏာလွှဲအပ်တာပေါ့။”
ဦးရဲထွန်း(သီပေါ) – နိုင်ငံရေး လေ့လာသုံးသပ်သူ
“တခမ်းတနားတွေ မလိုဘူး အချိန်မရွေး နေ့တိုင်းတွေ့လို့လည်း ရတာပဲ။ ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေ သာသနာရေးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ခေါ်ပြီး ဆွေးနွေးလို့ရတယ်။ မခေါ်လည်း ဒါပဲ။ ကာလုံခေါ်မှ တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်နိုင်မယ်လို့ ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ တလုံးမှ မဖော်ပြထားဘူး။”
ဦးဌေးဦး(စိန်ဂျွန်း) – တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ
“သမ္မတကိုယ်တိုင်က အရပ်သား စစ်စစ်ဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ စစ်မှုရေးရာ ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ စစ်သားတယောက်လို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် သိမှာမဟုတ်ဘူး။ ကာလုံမှာ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခြင်းအားဖြင့် နှစ်ဖက်အမြင်ကို ပိုဆွေးနွေးလို့ ရ လာနိုင်မယ်။ အကုန်လုံး အမြင်ကို ပိုသိရှိလာနိုင်မယ်။”
ဒေါက်တာ နိုင်ဆွေဦး – တည်ထောင်သူ၊ သေနင်္ဂမဟာဗျူဟာလေ့လာရေး အဖွဲ့
DVB TV – 03.09.2017
4241 April 7, 2018
4758 April 2, 2018
4243 October 30, 2017
6453 October 27, 2017
4007 October 20, 2017